सीको स्वागतको प्रतीक्षामा नेपाली, सामाजिक सञ्जालमा कसको कस्तो प्रतिक्रिया ? « Naya Page
सीको स्वागतको प्रतीक्षामा नेपाली, सामाजिक सञ्जालमा कसको कस्तो प्रतिक्रिया ?
यसरी सिंगारिएको छ काठमाडौं
प्रकाशित मिति : 12 October, 2019 10:56 am
काठमाडौं, २५ असोज । नेपालको राजकीय भ्रमणमा आज आउन लागेका जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वागतका लागि आम नेपाली ब्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको स्वागतको भव्य तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुक विकासको मार्गलाई तीव्रता दिंदै अगाडि बढिरहेका बेला हुन लागेको भ्रमण ऐतिहासिक हुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्राज्ञपरिषद् सदस्य लालकाजी लामाले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै भनेका छन्, ‘अतिथि सत्कार हाम्रो संस्कार हो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ राजकीय भ्रमणमा आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको स्वागतमा नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली लामबद्ध छौँ, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम् ।’
चितवनकी सङ्गीता भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै भनेकी छन्, ‘अतिथि देवोः भवः, छिमेकी राष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपालमा हृदयदेखि नै स्वागत छ ।’
आम नेपालीको आशाअनुसार नै भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच महत्वपूर्ण परियोजनामा सम्झौता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायी कृष्ण ढुङ्गानाले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई ‘हट्ली वेलकम टु नेपाल’ भन्दै सगरमाथाको देश, बुद्ध भूमिको देश र असल छिमेकीको नाता जोड्दै दुवै देशका राष्ट्रपतिको तस्वीर राखेर सामाजिक सञ्जालबाटै भ्रमणको स्वागत गरेका छन् ।
अहिले भारतमा रहेका राष्ट्रपति सी विशेष विमानबाट आजै त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्दै छन् । उनले आजै नेपाली समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ भने उनको सम्मानमा होटल सोल्टीमा राजकीय भोजको आयोजना गरिएको छ ।
आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ । उनीहरुको समुपस्थितिमा विभिन्न विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ ।
राजकीय भ्रमणका क्रममा उनले विभिन्न राजनीतिक नेतासँग शिष्टाचार भेट गर्ने छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई बलियो आर्थिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्ने बताएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दुई देशको सम्बन्ध युगौँ पुरानो रहेको र चीनका सामु सम्भावनै सम्भावना भएकाले चीनले जुन आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ, त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने आशा व्यक्त गरे । उनले यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने उल्लेख गरे ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि काठमाडौँमा भव्य तयारी गरिएको छ । सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखिएको छ भने विदेशी विशिष्ट पाहुनाको उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
‘सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै उँचो नेपाल चीन मित्रता’, ‘नेपाल चीन मित्रता विशाल गहन र अटल’, ‘बुद्ध र सगरमाथाको देशमा हार्दिक स्वागत छ ।’ चिटिक्क सिंगारिएको काठमाडौंको सडकमा बनाइएको विभिन्न स्वागत गेटमा उक्त नारा लेखिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको अनुभव हुने गरी पानीको फोहरा निर्माण गरिएको छ । ढकमक्क फुलेको फूलले विमानस्थलको शोभा नै बढाई दिएको छ । विमानस्थलकै मूल गेटमा उनको स्वागतका लागि स्वागत द्वार निर्माण गरिएको छ ।
तीनकुने पार्कलाई फूलको बगैंचाले सजाइएको छ । यहाँको स्वागत द्वारको दुई छेउमा नेपाल र चिनियाँ राष्ट्रपतिको फोटो राखिएको छ । माथिल्लो भागमा पशुपतिनाथ, स्वयम्भूको तस्वीर छ । यहाँ राखिएको डिस्प्ले बोर्डमा पाटे बाघ, गैंडा, पाण्डाका तस्वीर छिनछिनमा देख्न सकिन्छ ।
नेपालका राष्ट्रपति भण्डारी चीनको भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षीसँग भएको भेटघाट, उनको स्वागत र सम्मान गरिएका सुन्दर तस्वीर प्रदर्शनमा छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति सीसँग हात मिलाउँदै गरेको फोटो पनि छ । ग्रेटवाल र चिनियाँ आकर्षक शैलीका संरचना यहाँ देख्न सकिन्छ ।
लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, जानकी मन्दिर, सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा, कुमारी, फेवातालको तस्वीर प्रदर्शनमा राखिएको छ । सडकको दायाँ बायाँ खम्बामा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिको तस्वीर लहरै राखिएको छ । ठाउँ ठाउँमा नेपाली र चिनियाँ झण्डा प्रदर्शन गरिएको छ । सडकका विभिन्न क्षेत्रमा फ्लेक्समा नेपालका सुन्दर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको फोटो राखेर आकर्षक बनाइएको छ ।
काठमाडौंको माइतीघर झिलिमिली बनाइएको छ । माइतीघर मण्डल रङरोगन गरी सुन्दर बनाइएको छ । सडकहरु चिल्ला पारिएका छन् । ट्राफिक सङ्केतलाई दुरुस्त पारिएको छ । उनको स्वागतका लागि सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थीदेखि आम नागरिक प्रतीक्षारत छन् । सरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय पोशाकमा सजिएर सीको स्वागतको तयारी गरेका छन् ।